Somaliland: Wasaarada Caafimaadka Ayaa Ka Masuul Ah inuu xidhmo Wajaale Hospital – Guban Media
Wajaale Hospital, Somaliland. (Photo/File)
September 11, 2020 September 11, 2020 Ali Mohamed 55 Views 0 Comments
Wajaale Hospital oo furnaa mudo yar ayaa xidhmay iskuna bedelay goob laga raro xoolaha. Hospitalku oo ay baxday lacag gaaraysa $1.5 million dhismihiisa iyo qalabayntiisa, waxa maamulayey Wasaarada Caafimaadka. Hospitalku waxa Ka shaqeenayey 30 qof oo ay ku jiraan 4 dhakhaatiir oo ka soo baxay jaamacadaha qaranka.
Maxay ku dhacday in Wasaarada caafimaadka aysan ka warhayn xaalada uu ku sugnaa Hospitalku? Maxay shaqaaluhu ay mushahar u qaadanayeen haddii Hospitalkii aanu shaqayn?
Halkan waxa ka muuqata masuuliyad daro tii ugu xumayd. Sida dhaqan ka noqotay Somaliland–qabyaalad qaawan darted marnaba ma dhacayso in dadkii arrintan masuulka Ka ahaa lala xisaabtamo oo talaabo laga qaado.
Gabiley waa deegaan baaxad weyn oo u baahan inay magaalo ama deegaan walba ay yeelato gole deegaan oo ismaamula. Laakiin, mayorka Gabiley ayaa maamula dhulkaa baaxada leh, maamulana miisaaniyada gobolka Gabiley—-kuna koobay magaalada Gabiley oo keliya. Taas oo dhalisay horumar la’aan deegaanadii kale.
Dadweynaha reer Gabiley war kama hayaan dakhliga soo gala, iyo waxa, meesha mashaariicda miisaaniyada lagu bixiyo.
Marka uu mayorku ka hadlayey cida masuulka ah inuu xidhmo Wajaale Hospital, waxa uu yidhi, “ Wasaarada Caafimaadku way u hawl gashay Wajaale Hospital,” waxa kaloo uu raaciyey in Wasaarada Caafimmadka aysan masuul ka ahayn inuu xidhmo Hospitalku. Isagoo ku eedeeyey bulshada reer Wajaale inuu Hospitalku xidhmo. Laakin, mayorku miyaanu ogayn in masuuliyada ugu weyn Caafimaadka wadanka uu saran yahay Wasaarada Caafimaadka
Xidhitaanka Wajaale Hospital waxa ka masuul ah: Madaxda ugu saraysa ee Wasaarada Caafimaadka, ay ku jiraan Wasiir, Agaasimaha Guud, ilaa iyo isuduwaha Caafimaadka ee gobolka. Waxaa Ka masuul ah mayorka Wajaale iyo wakiilada wajaale ee ku jira golaha deegaanka Gabiley. Waxaa Ka masuul bulshada reer Wajaale oo ogolaaday ama indhaha ka qabsaday hospitalkii magaalada oo xidhmay. Waxaa kaloo Ka masuul ah masuuliyiinta reer Wajaale ugu jira maamulka Biixi.Masuulyiintaas oo soo guulwadeeyo marka uu madaxweynuhu ama Xisbiga Kulmiye dano Ka leeyihiin ama codad Ka doonayaan deegaanka Wajaale.
Reer Somaliland iyo Gabileyba waa inay ku taageernaa hadba qorshaha ay la yimaadaan reer Wajaale. Somaliland waxa ka socda waa waali , qas iyo qabyaalad qaawan. Madax masuuliyad qaadanaysa ma jirto. Sidaas darteed waxa habboon in deegaan walba inay maamushaan arrimahooda si dadweynuhu u helaan daryeel caafimaad iyo nabadgelyo sida dastuurka JSL uu dhigayo. Wixii kale waa fawdo iyo qab-qabsi hor leh.
← Somaliland’s 2021 Legislative Elections: The Dangers of Pandering to Clannish, Identity Politics
Fikrada Guban: Waa in la xakameeyo Beenta, Dacaayada BulshoTV Fidinayso →